Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5.2 Dhismo tijaabadaada
Dhisidda aad tijaabo gaar ah waxaa laga yaabaa qaali ah, laakiin waa in aad awood u siin doona si ay u abuuraan tijaabo ah in aad rabto in aad.
Marka lagu daro tijaabooyinka tijaabada ah ee kor ku xusan deegaannada hadda jira, waxaad sidoo kale dhisi kartaa tijaabadaada. Faa'iidada ugu weyn ee habkan waa xakamayn; haddii aad dhiseyso tijaabada, waxaad abuuri kartaa deegaanka iyo daaweynta aad rabto. Meelahan tijaabada ah ee loo yaqaan 'experimental environment' waxay abuuri karaan fursado ay ku tijaabiyaan aragtiyo aan suurtagal ahayn in lagu tijaabiyo jawi dabiici ah. Dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee dhisaya tijaabadaada waxay tahay in ay noqon karto mid qaali ah iyo in jawiga aad awoodid inaad abuurto aysan laheyn xaqiiqada nidaamka dabiiciga ah. Cilmi-baareyaasha waxay dhisaan tijaabadooda waxay sidoo kale leeyihiin qorshe lagu qorayo kaqeybgalayaasha. Markaad ka shaqeynayso nidaamyada jira, cilmi baarayaashu waxay asal ahaan keenayaan tijaabooyinka ka qaybgalayaasha. Laakiin, marka cilmi-baarayaashu dhisto tijaabadooda, waxay u baahan yihiin inay kaqeyb qaataan. Nasiib wanaag, adeegyada sida Amazon Mechanical Turk (MTurk) waxay ku siin karaan cilmi-baarayaal si habboon si ay uga-qayb-galayaashu u keenaan tijaabooyinkooda.
Mid ka mid ah tusaalooyinka muujinaya waxyaalaha ku saabsan jawiga ballaadhan ee loogu talagalay in lagu tijaabiyo fikradaha abfilku waa tijaabada shaybaadhka dijitalka ah ee Gregory Huber, Seth Hill, iyo Gabriel Lenz (2012) . Tijaabadan ayaa sahlieysa xaddidaad wax ku ool ah oo la taaban karo oo ku aaddan hirgelinta xukun dimoqraadi ah. Horaantii cilmi baaris la'aanta ah ee doorashooyinka dhabta ah waxay soo jeediyeen in codbixiyeyaashu aanay awoodin inay si sax ah u qiimeeyaan waxqabadka siyaasiyiinta khilaafyada. Gaar ahaan, cod-bixiyeyaashu waxay u muuqdaan inay ka cabanayaan saddex siyood: (1) waxay diiradda saareen dhawaan, halkii ay wax ku oolli lahaayeen; (2) waxaa lagu maamuli karaa erey-celin, rikoodh, iyo suuq-geyn; iyo (3) ay saameyn ku yeelan karaan dhacdooyinka aan ku xirneyn waxqabadka xilka, sida guusha kooxaha isboortiga maxaliga ah iyo cimilada. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan hore, way adag tahay in la kala saaro midkasta oo ka mid ah waxyaabaha kale ee ka dhacaya doorashooyinka dhabta ah ee murugada leh. Sidaa daraadeed, Huber iyo asxaabtu waxay abuureen jawi aad u fudud oo lagu codeeyo si ay u go'aamiyaan, ka dibna tijaabiyaan tijaabada, mid kasta oo ka mid ah saddexdaas midoodba.
Sida aan u sharaxo tijaabinta tijaabada ah ee hoos ku xusan, waxay noqonaysaa mid aad u macquul ah, laakiin xusuusnow in xaqiiqda dhabta ahi aanay ahayn ujeeddo tijaabo ah oo tijaabo ah. Halkii, hadafku waa inuu si cad u jahawareeriyo geeddi-socodka aad isku dayayso inaad wax ku barato, iyo go'doomintan adag ee adagi mararka qaar suuragal ma ahan in la barto wax-qabad dhab ah (Falk and Heckman 2009) . Intaa waxaa dheer, kiiskan gaarka ah, cilmi-baarayaashu waxay ku doodeen in haddii codbixiyeyaashu aysan si fiican u qiimeyn karin waxqabadkaan goobtan si fudud loo fududeeyay, markaa ma ayan awoodin inay ku sameeyaan meel aad u adag, oo aad u adag.
Huber iyo saaxiibadaa waxay isticmaaleen MTurk si ay uga soo qaybgalayaashu u soo qoraan. Marka uu ka qaybgalaha siiyey ogalaansho la ogeysiiyey islamarkaana maray tijaabo gaaban, waxaa loo sheegay in ay ka qaybgashay cayaaraha 32-kulan ah si ay u kasbadaan sumcooyinka loo bedeli karo lacagta dhabta ah. Bilawga ciyaarta, ka qaybgale kasta ayaa loo sheegay in loo diray "qaybiye" taasoo siin doonta shaandhadeeda bilaashka ah ee wareega wareegga ah iyo in qaar ka mid ah bixiyeyaashu ay ka faa'iidaystaan ​​kuwa kale. Dheeraad ah, ka qaybgale kasta ayaa sidoo kale loo sheegay in ay heli doonto fursad ay ku sii hayn karto qaybiyaha ama loo qoondeeyo mid cusub kadib 16 wareeg oo ciyaarta ah. Marka la eego waxa aad ka ogtahay bartilmaameedyada Huber iyo ujeedooyinka cilmi-baarayaasha, waxaad arki kartaa in qoondeyuhu u taagan yahay dawlad iyo doorashadani waxay u taagan tahay doorasho, laakiin kaqeybgalayaashu ma aysan ka warqabin hadafyada guud ee cilmi-baarista. Guud ahaan, Huber iyo asxaabtu waxay qorteen ilaa 4,000 oo kaqeybgalayaal ah kuwaas oo la bixiyay qiyaastii $ 1.25 hawsha qaadatey sideed daqiiqo.
Xusuuso in mid ka mid ah natiijooyinkii ka soo baxay cilmi-baaris hore uu ahaa in cod-bixiyayaashu abaal-marinayaan oo ay ciqaabayaan kuwa khibrad u leh natiijooyinka ka baxsan koontaroolkooda, sida guusha kooxaha isboortiga gudaha iyo cimilada. Si loo qiimeeyo in kaqeybgalayaashu go'aannada codeynta ay saameyn ku yeelan karaan munaasabadaha si aan kala go 'lahayn, goobaha Huber iyo asxaabtu waxay ku daraan bakhtiyaanasiib si nidaamkooda tijaabada ah. Marxaladda 8aad ama wareegga 16aad (ie, ka hor inta aan la beddelin fursadda beddelaha bixiyaha) ka-qaybgalayaasha ayaa si aan kala sooc lahayn loo dhigey bakhtiyaa-nasiibka halka qaar ka mid ah ay ku guuleysteen 5,000 dhibcood, qaar ayaa badiyay 0 dhibcood, qaarna waxay lumiyeen 5,000 dhibcood. Bakhtiyaa-nasiibka waxaa loogu talagalay in uu la qabsado wararka wanaagsan ama xun ee ka madaxbannaan waxqabadka siyaasiyiinta. Inkasta oo kaqeybgalayaashu si cad u sheegeen in bakhtiyaanasiibku uusan xidhiidh la lahayn waxqabadka ay bixiyeyaashooda, natiijada bakhtiyaanasiibka ayaa wali saameyn ku yeeshay go'aamada kaqaybqaatayaasha. Ka qaybgalayaasha ka faa'iideystey bakhtiyaa nasiibka waxay u badnaayeen in ay sii wadaan bixiyahooda, waxtarkooduna aad ayuu u xooganaa markii bakhtiyaanasi ku dhacay wareegga 16-ka mid ah go'aanka lagu beddelay-marka loo eego markay ahayd wareega 8 (Jaantuska 4.15). Natiijooyinkaas, oo ay weheliyaan qaar ka mid ah tijaabooyin kale ee wargeyska, ayaa keenay Huber iyo asxaabtooda inay ku soo gabagabeeyaan xitaa marka la eegayo goobaha fudud, codbixiyayaashu waxay ku adagtahay inay samaystaan ​​go'aano caqli-gal ah, taas oo keentay saameynta cilmi-baarista mustaqbalka ee ku saabsan go'aan qaadashada cod-bixiyayaasha (Healy and Malhotra 2013) . Tijaabada Huber iyo saaxiibada waxay muujinayaan in MTurk loo isticmaali karo in lagu qoro kaqeybgalayaasha tijaabooyinka sheybaarka si ay u tijaabiyaan aragtiyo gaar ah. Waxa kale oo ay muujinaysaa qiimaha dhisidda jawigaaga tijaabada ah: waa adag tahay in la qiyaaso sida hababkaas loo kala soocay si gooni ah si nadiif ah meel kasta oo kale.
Jaantuska 4.15: Natiijooyinka ka yimid Huber, Hill, and Lenz (2012) . Ka qaybgalayaasha ka faa'iideystey bakhtiyaa nasiibka waxay u badnaayeen in ay sii hayaan hantidooda, waxtarkuna wuxuu ahaa mid xoogan markii bakhtiyaanasi ku dhacay wareegga 16-ka mid ah go'aanka lagu beddelay-marka loo eego markii uu dhacay wareega 8aad. Waxaa laga soo qaatay Huber, Hill, and Lenz (2012) , sawirka 5.
Intaa waxaa dheer in la dhiso tijaabooyin la mid ah shaybaarka, cilmi baarayaashu waxay sidoo kale dhisi karaan tijaabooyin ay ka mid yihiin goobo badan. Tusaale ahaan, Centola (2010) tijaabisay tijaabo Centola (2010) ah oo dijitaal ah si loo barto saameynta qaabka shabakadda bulshada ee faafitaanka dabeecadda. Su'aashiisa cilmi baarista waxay ubaahan tahay inuu ilaaliyo dabeecada isla'eg ee ku faafta dadweynaha ee lahaa qaabab isku xiran oo kala duwan oo bulsheed laakiin ay ahayd mid kale oo aan la garan karin. Habka kaliya ee lagu sameeyn lahaa tan waxay la socotey tijaabo ah, tijaabin qaas ah. Xaaladdan, Centola waxay dhistay beesha caafimaadka bulshada ku salaysan.
Centola waxay qortey qiyaastii 1,500 kaqeybgalayaal iyada oo loo marayo xayeeysiin ku samaysay bogagga caafimaadka Marka ay ka qaybgalayaashu yimaadaan bulshada online-oo loo yaqaan "Network Healthy Lifestyle Network"-waxay bixiyaan ogolaansho wargalin ah kadibna loo xilsaaray "saaxiibo caafimaad." Sababtoo ah sida Centola u xilsaaray saaxiibadayaashii caafimaadka, wuxuu awooday inuu isku xiro qaabab kala duwan oo bulsheed kooxo kala duwan. Qaar ka mid ah ayaa loo dhisay in ay leeyihiin shabakado khayaali ah (halkaas oo qof kastaa si siman loola xidhiidhi karo), iyada oo kooxo kale loo dhisay si ay u yeeshaan shabakado qallafsan (halkaas oo isku xirnaanta ay ku badanyihiin maxaliga ah). Ka dib, Centola wuxuu ku dhaqmay hab dhaqameed cusub oo shabakad kasta ah: fursadda ah in la diiwaan geliyo bog cusub oo leh macluumaad caafimaad oo dheeraada. Mar kasta oo qof kastaaba u saxiixo boggan cusub, dhammaan saaxiibadeeda caafimaad waxay heleen email ay ku dhawaaqeen habdhaqankan. Centola waxay ogaatay in habdhaqankan-u saxiixay website-ka cusub-inuu sii faafay shabakad isku xiran oo aan ka ahayn shabakada kala duwan, taas oo ka soo horjeedda aragtiyada qaarkood.
Guud ahaan, dhisidda tijaabadaaga ayaa ku siinaya xakamayn badan; waxay kuu sahleysaa inaad dhisato jawiga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah in lagu kala saaro waxa aad doonayso inaad waxbarto. Way adag tahay in la qiyaaso sida labada tijaabo ee aan ku qeexay in la samayn lahaa jawi hore oo hadda jira. Dheeraad ah, dhisidda nidaamkaaga ayaa hoos u dhigaya cabashooyinka anshaxa ee ku saabsan tijaabinta nidaamyada jira. Markaad dhisto tijaabadaada, si kastaba ha ahaatee, waxaad ku jirtaa dhibaatooyin badan oo lagu arko tijaabooyinka shaybaadhka: kaqeybgalayaasha ka qaybgalayaasha iyo walwalka ku saabsan xaqiiqada. Dhibaatada ugu dambeysa ayaa ah in la dhiso tijaabintaada gaarka ah ay noqon karto mid qaali ah iyo waqti-dheerba, inkastoo, tusaale ahaan, tusaalooyinkan waxay muujinayaan, tijaabooyinka waxay ka koobnaan karaan jawi fudud (sida daraasadda codbixinta ee Huber, Hill, and Lenz (2012) ) si loo helo goobo adag oo adag (sida daraasaadka shabakadaha iyo faafinta by Centola (2010) ).